“Rumeyso Ama Ha Rumeysan, waxaan ka baqay in Ronaldo uu jawi jah wareer ah ka abuuro qolka labiska” – Gool FM
(Juventus) 16 Marso 2019. Ciyaryahanka kooxda Juventus ee reer Brazil Douglas Costa ayaa qiray inuu ka walwalsanaa in imaatinka Cristiano Ronaldo ee Bianconeri ay ka abuuri karto jawi jah wareer ah qolka labiska ee kooxda, balse ay dhacay wax ka duwan aragtida uu qabay.
Cristiano Ronaldo ayaa bandhig fiican ku hor sameeyay kooxda Atletico Madrid kulankii lasoo dhaafay, kadib markii uu dhaliyay saddexleey isla markaana uu awooday in kooxdiisa Juventus uu u gudbiyo wareega siddeeda ee tartanka Champions League.
Hadaba Douglas Costa ayaa tooshka ku ifiyay qaab ciyaareedka Cristiano Ronaldo, kaasoo gacan weyn ka geystay horumarka qaab ciyaareedka kooxda Juventus, inkastoo uu sheegay xidiga reer Brazil inuu aaminsanaa in imaatinkiisa aysan wax faa’iido ah u lahayn Bianconeri.
“Rumeyso Ama Ha Rumeysan, marka la sheegay in Cristiano uu imaanayo kooxda, waxaan is weydiiyay, sida uu noqon doono qolka labiska kooxda, kadib imaatankiisa?”.
“Waa in dhamaanteen midba midka kale ee ku sugan kooxda aan is jeclaanaa, sababtoo ah qof walba wuxuu raadinayaa boos joogta ah, balse Ronaldo wuxuu ku guuleystay inuu kasbado jaceylka qof walba”.
“Waa shaqsi aad u fudud ee dadaal badan, Juventus waxay raacdo ugu jirtay ciyaaryahan leh maskaxdiisa oo kale, wuxuu noo qabtay wax badan tan iyo markii uu yimid kooxda”.
Tababare Solskjær oo si cajiib ah kaga hadlay kulanka Barcelona ee wareega siddeeda tartanka Champions League